Imfihlo kaPomare - Indawo yokuhlala yeStudio
Beka phezulu ngaphezu kwecanopy yetyholo lemveli elinemibono ezolileyo yeeyacht ezimiswe kwibhayi engezantsi, ukuhlamba ukukhanya kwelanga situdiyo sakho sabucala somgangatho ophantsi, kunye nelali eyimbali yaseRussell umgama oyimizuzu esi-8 yokuqhuba.
Ujikelezwe yindalo unokumva uKiwi efowuna ebusuku, uvuke kwisandi sikaTui, edityaniswe neFantails, Wood Pigeons, Tom Tits, kunye noWeka njengoko beqhubeka nosuku lwabo.
Ezantsi kumgama ongamatyholo weemitha ezili-150 yipomare Bay entle efihlakeleyo, ekhuselwe sisigebenga sasePohutakawa.
Iimbono ezingaphazamisekiyo kunye nokukhanya okwaneleyo zibonelela ngokuphumla okugqibeleleyo ukuze uphumle, unqumame kwaye ubonakalise, ngelixa ufunxa indawo epholileyo yeli xesha ebandakanya: indawo yokuhlala ebanzi, ikhitshi, iTV eneNetflix, iWiFi, igumbi lokulala elahlukileyo elinebhedi yoKumkanikazi, kunye negumbi elikhulu. igumbi lokuhlambela. Okanye thambisa imitha kwidesika ebanzi.
Igcinwe kowona mgangatho uphezulu, zonke iinzame zenziwe zokuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho kugqibelele, nazo zonke ilinen zibonelelwe, indawo yokulala esemgangathweni, ishawa yoxinzelelo oluphezulu kunye nezindlu zangasese (ngenxa yothintelo lokuhlamba amanzi akunakwenzeka), iti kunye nezixhobo zokwenza ikofu, i-toaster. , i-microwave, i-induction cooktop, i-Nutribullet, zonke izitya/izinto zokucheba/izitya, kunye ne-Webber BBQ yokulungiselela ukutya okulula.
32" TV ene-I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Ifumaneka kwiPeninsula yeTe Wahapu, ejikelezwe ngamatyholo omthonyama kunye neendlela zamanzi, uluntu lwale ndawo lunebhongo kakhulu ngendawo yalo entle, ke ngoko bonke bathatha inkathalo enkulu ukuyikhusela kunye nobomi basendle, ngelixa besonwabela konke uRussell kunye nommandla ongqongileyo. ukunikeza. Ezinje ngeendawo zewayini zalapha ekhaya i-Omata Estate kunye ne-Paroa Estate (ixesha lonyaka), iDuke edumileyo neyimbali yaseMarlborough, iPompallier Cafe kwiMishini yakudala yaseFransi, ukukhankanya nje ezimbalwa. Kwabo banqwenela ukonwabela ngaphandle kukho iindlela ezininzi zokuhamba: ukusuka eOkaito ukuya eRussell, iFlagstaff Hill ukuya eTapeka kunye nomgama omde iOpua ukuya ePaihia. Kangangemini yonke emanzini ajikeleze iBay of Islands uhambo olufutshane lwephenyane ukusuka eRussell ukuya kwilokishi edlamkileyo yasePaihia abasebenzi basekuhlaleni babonelela ngeehambo ezininzi, uninzi lwabo oluthatha uhambo olusuka eRussell wharf.
Njengababuki bendawo abahlala kuyo, siyafumaneka ukuba siyafuneka, nokuba kungenxa yemicimbi ebalulekileyo okanye iingcebiso ezilula, nangona kunjalo, njengathi, siyayixabisa into yokuba unokufuna ubumfihlo obupheleleyo kwaye uyakukuhlonipha oku.
Njengababuki bendawo abahlala kuyo, siyafumaneka ukuba siyafuneka, nokuba kungenxa yemicimbi ebalulekileyo okanye iingcebiso ezilula, nangona kunjalo, njengathi, siyayixabisa into…